Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz, ukudityaniswa kwe-autochthonous ne-Hispanic | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 24/05/2021 13:15 | IGastronomy, Mekhsikho
Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz kunesiseko esibalulekileyo se iimveliso zaselwandle. Ayilolize, lo mmandla ubekwe kwi-Gulf yaseMexico kwaye, hayi kuphela ukuba uneeekhilomitha ezininzi zonxweme, kodwa kunye nesixeko esikunika igama ukuba linezibuko elibaluleke kakhulu elizweni.
IVeracruz yayiyidolophu yokuqala apho iSpanish yasekwa khona Mekhsikho. Ke ngoko, i Icandelo leSpanishi ikhona kakhulu kwi-gastronomy yayo. Oku kudityaniswe ne Isiko laseMesoamerican langaphambi kweColombia kunye kunye Izinto zokutya zaseAfrika nezaseCaribbean ukunika i-gastronomy enamandla njengoko imnandi ngokwe-flavour. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokutya okuqhelekileyo kweVeracruz, siyakukhuthaza ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz: Imbali encinci
2 Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz: Ezona zitya zithandwa
2.1 Uhlobo lwentlanzi yaseVeracruz
2.2 IArroz la la tumbada, enye into emnandi kukutya okuqhelekileyo kweVeracruz
2.3 Incitshisiwe okanye icinyiwe
2.4 Zacahuil okanye iSacahuil
2.5 I-Crab chilpachole
2.6 Imogo mogo
Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz: Imbali encinci
Yonke into esikuxelele yona malunga neVeracruz gastronomy iyatyetyiswa, emva koko, kunye neemveliso ezikhuliswe kwimihlaba yaseburhulumenteni, zichume kakhulu kwaye zinendalo eyahlukeneyo ngenxa yemozulu yetropiki kunye neetropiki enayo.
Kodwa into yokuqala esifuna ukukuxelela yona yimbali encinci yokutya okuqhelekileyo kweVeracruz. AbaseSpain bazisa iimveliso ezininzi ekudleni kwabo. Phakathi kwabo, iimbotyi, irayisi, ingqolowa kunye nemon. Kodwa kunye nenyama enje nge ihagu okanye eye hen namatye anqabileyo anjengaye ioli yeoli kunye igalikhi.
Nje ukuba kusekwe kumazwe aseVeracruz, abahlali batsha baqala ukulima ezinye iimveliso, ezinye sele ziyinto yesiqhelo kukutya kwangaphambi kweColombia, ngelixa ezinye zazingathandwa kangako. Phakathi kwabo kwakukho ngqolowa, i coffee kunye neziqhamo ezifana iinanapple, coconut, sapote, imango, iguava okanye iorenji.
Sele kwinkulungwane ye-XNUMX, kufika abafikayo abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi abacebisa isisu seVeracruz ngezithethe isiArabhu, icaribbean kwaye ivela Amazwe aseYurophu. Konke oku kubangele ezahlukeneyo ezintathu Cuisine ngaphakathi kwesiqhelo sombuso waseMexico. Makhe sizibone.
Ukutya kweCreole kunye nefuthe lase-Afrika laseMelika. Njengoko igama layo libonisa, ifaka izinto zaseSpain, zomthonyama nezaseAfrika. Isininzi kwaye, phakathi kweemveliso eziqhelekileyo ezisetyenziswayo, yicassava, eyathi iSpanish yayibiza ngokuba yi-yam ngokuchanekileyo ngenxa yokubonakala kwayo kufana nale tuber yaseAfrika; ingqolowa; iswekile okanye iziqholo ezinjengeJamaica intyatyambo kunye netamarind.
Ukutya kweHuasteca. Isekwe kwisithethe se idolophu yolutsha, ekumantla eVeracruz. Eyona protagonist yayo ngumbona kwiintlobo ezahlukeneyo ezinje ngomhlophe, mfusa okanye bomvu. Phakathi kweeresiphi zayo eziqhelekileyo zezi zacahuill, i-tamale okanye intlama, eyenziwe ngqolowa, ezele yinyama evela kwizilwanyana ezahlukeneyo; i imole de nopales kunye umhluzi wehuasteco.
Ukutya kweTotonac. Ngokulinganayo okuqhelekileyo emantla, isekwe kumbona ngokwawo, ipepile kunye neembotyi. Phakathi kwezitya zayo eziqhelekileyo kukho iintlobo ezahlukeneyo ze iinyanga (iziselo ezisekwe kumbona ukusuka kumaxesha angaphambi kweSpanishi) kunye Iifama.
Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz: Ezona zitya zithandwa
Njengoko sikuxelele, ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz kunesiseko esibalulekileyo se iintlanzi kunye neelwandle, kodwa ikwabandakanya okumnandi iisosi yenziwe ngemveliso zalapha ekhaya. Sizokubonisa ezinye zezi zitya.
Uhlobo lwentlanzi yaseVeracruz
Esi sidlo sidibanisa izinto zombini: iziqhamo zolwandle kunye nezomhlaba waseVeracruz. Inokwenziwa nangayo nayiphi na intlanzi kule ndawo, ukusuka kwi-dogfish ukuya kwi-cabrilla nge-snook, tilapia kunye ne-basal. Nangona kunjalo, eyona isetyenzisiweyo yi Umhlobo entlanzi obomvu, eyaziwa kwingingqi njenge Umhlobo entlanzi obomvu, intlanzi yaselwandle enencasa kakhulu.
Nangona kunjalo, imfihlo yale recipe yesiqhelo isosi, enomdla, yenye yezinto ezimbalwa ezenziwe eMexico ayirhawuzeli. Izithako zalo yioyile ye-olive, igqabi le-bay, ityuwa kunye nepepile, itswele, i-tomato, iparsley, igalikhi, i-oregano, ii-olive kunye nee-capers.
Ukulungiswa kwayo kulula kakhulu, kuba, yakuba ifunyenwe isosi, yenziwa kunye nentlanzi eziko. Ngokuchanekileyo ukuyinika into yokubamba iziqholo, inokongezwa cuaresmeño chili Kwaye wakhonza ngerayisi emhlophe okanye iitapile. Ngaphandle kwamathandabuzo, isimangaliso sokutya.
IArroz la la tumbada, enye into emnandi kukutya okuqhelekileyo kweVeracruz
IArroz la la tumbada, esinye sezinto ezisisiseko kukutya okuqhelekileyo kweVeracruz
Singathi iyalingana ukutya kwethu kwaselwandle, nangona inempawu zayo ezizodwa. Izinto zayo, ukongeza kwirayisi, zii-shrimp, oononkala, i-clams kunye nezinye iimveliso zolwandle apho a isofrito yenziwe ngegalikhi, itswele, itumato kunye nepepile ebomvu. Okokugqibela, incasa yayo iyandiswa ngamagqabi eparsley, i-oregano, ikoriander kunye neepazote.
Kubonakala ngathi imvelaphi yesi sidlo kufuneka ifumaneke ekudleni kwabalobi abathi, ngekhulu le-XNUMX, benza umsebenzi wabo kumanxweme aseVeracruz. Kwaye, njengentshisakalo, siza kukuxelela ukuba ibizwa ngokuba «kukulala» ukubonisa ukuba ilungisiwe isuphu.
Incitshisiwe okanye icinyiwe
Idume kakhulu kumbindi wommandla, ayikho enye into ngaphandle ii-tortillas zengqolowa kunye ne-salsa ngaphezulu kwaye ihonjiswe ngeshizi ye-ranchero kunye netswele. Bafumana igama lika incanyathisiwengokuchanekileyo, kuba imiphetho yekhekhe icinyiwe ukuze isosi ingawi.
Zibonakala ngathi iisope Zenziwe kwilizwe liphela kwaye, ukuba ufuna ukuba nento eqhelekileyo yokutya eVeracruz, siyacebisa kuba zimnandi. Nangona kunjalo, abemi bommandla bahlala bebathatha desayuno.
Zacahuil okanye Sacahuil
El Tamale Iyaziwa kakhulu, hayi eVeracruz kuphela, kodwa naseMexico iphela. Njengoko uyazi, kunjalo ingqolowa ephekiweyo isongwe ngegqabi layo. Nangona kunjalo, i-zacahuil sisiphumo se-Huasteca cuisine, njengoko sele sikuxelele.
Ngokuchanekileyo a tamale enkulu, mhlawumbi eyona inkulu onokuyifumana kwilizwe lonke. Kodwa inembali engaphezulu. Inhlama yengqolowa ilungiselelwe kule recipe njengoko abemi benzayo kwiminyaka emakhulu eyadlulayo. Yiyo ke loo nto inika ubunzima obubiziweyo nixtamal eneenkozo ezingaphantsi komhlaba kunye nembonakalo eqhekeke ngakumbi.
Le ntlama igcwele Isinqumelo, ipepile kunye nenyama yehagu okanye inyama yeTurkey, phakathi kwezinye izithako. Le yokugqibela yintaka enkulu yaseMelika enembonakalo efana ne-turkey.
Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz kukwabandakanya isuphu emnandi kakhulu kwaye ukugcwaliswa. Yimeko ye chilpachole, Imvelaphi yayo ibangelwa kukutya kwesiFrentshi. Kungenxa yokuba ayisiyiyo enye into engeyiyo enye isobho lokutya kwaselwandle Yenziwe ngeentlanzi kunye nononkala (oononkala abahlaza okwesibhakabhaka abavela kumda weVeracruz).
Nangona kunjalo, i-chilpachole yomelele ngakumbi kunomhluzi wesonka waselwandle. Kwabaqalayo, kunikwa ukungqinelana ne- intlama yengqolowa. Kwaye, ukongeza, ine-anyanisi, isilili eyomileyo, iitumato, igalikhi kunye neepazote. Zonke ezi zinto zinika ukuthungwa okufanayo atole, isiselo esivela kwimvelaphi yangaphambi kweSpeyin esele siyichazile, nangona oku kuswiti ngokwesiko.
Ukukhanya ngu Izote umhluzi weentyatyambo. Isiseko salo sisityalo sendalo esikuMbindi Merika kwaye sihlala sithwele i-shrimp, i-chives, i-tomato, i-epazote kunye Iindlebe zepipian. Ngokulandelelana, ezi yipasta eyenziwe ngembewu yethanga ekwasetyenziselwa ezinye izitya.
I-banana mogo, enye into emnandi kukutya okuqhelekileyo kweVeracruz
Kuzo zonke izitya eziqhelekileyo zeVeracruz, oku mhlawumbi yenye yezona zibalulekileyo Iingcambu zaseAfrika. Kuba, ikwabizwa kanjalo machuco, ayikho enye into ngaphandle ucoceko oluluhlaza olucocekileyo.
Ukwenza oko, ezi zinesikhumba ziphekwe emanzini abilayo. Xa ukutyabeka kwabo kugqabhuka, bayasuswa kwaye ibhotolo kunye netyuwa zongezwa ukuzityumza zide zibe nokucoceka okufanelekileyo. Kodwa esi sitya asikakulungeli okwangoku. I-puree ivunyelwe ukupholisa kwifriji ukuze iqinise kwaye emva koko yenzeke nzulu. Ngokwesiqhelo, iya kunikwa njengecala leembotyi.
Ukuba izitya esele sizichazile ukuza kuthi ga ngoku zimnandi, iivenkile zaseVeracruz azikho mva kakhulu. Phantse zonke iiresiphi zakhe zisekwe ingqolowa kwaye, phakathi kweilekese ezinomdla kakhulu, siza kuthi sikhankanye chogostas, ezinye iibhola ezinodongwe olutyiwayo kunye nemvelaphi yazo ibuyela kumaxesha angaphambi kweSpanishi.
Imveli ngakumbi duchesses, Uhlobo lweetacos ezizaliswe yicoconut meringue, kunye masafini, ezinye iipolvorones ezigqunywe siswekile kunye nesinamon. Kwelakhe icala, Ithemamal Ingqolowa yombona kunye neswekile enongwe nge-anise kwaye inikwa ishushu kwaye isongelwe kwigqabi le-berijao.
La ithanga Ungumlinganiswa ophambili weelekese ezininzi zaseVeracruz. Yimeko ye fritters, nangona, ngokubhekisele kwezi, iigullets, ezizaliswe yimeringue. Okokugqibela, i pemoles bangumgubo wombona, ibhotolo kunye neswekile yedonathi kunye marzipan ukusuka eVeracruz Lubonakala ngokuba namandongomane endaweni yeeamangile.
Sele sikuxelele ngayo atoleYenziwe ngeencasa ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwiziqhamo ezilungiselelwe zona. Ke, singathetha nawe ngeatole yebhanana, ithanga, umbona okanye ikoyol (isiqhamo esifana nekhokhonathi). Iyatyiwa eVeracruz horchata, nangona ingenziwa njengaseSpain. Apho yenziwe ngelayisi kunye nesinamoni okanye ivanilla.
Eyona nto ixhaphakileyo ziziselo ezinje menyul, yenziwe nge-mint, kunye popo. Okokugqibela kuya kuba mnandi, njengoko inecocoa, irayisi, isinamoni kunye neziqhamo ezinje nge-azquiote. Okokugqibela, i inkunzi yenkomo Le yi-cocktail enxilisayo enezixhobo zayo yi-brandy yomhlanga, ubisi olunencindi kunye nebhotolo yamandongomane, nangona ikwenziwe nezinye iincasa ezifana nemango.
Ukuqukumbela, sikuxelele malunga Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz. Njengoko uza kubona, kubandakanya izitya zeentlobo zonke, ezimnandi ngakumbi. Kodwa iVeracruz ayisiyiveli nje kuphela kwisisu sayo, kufanelekile ukuba undwendwele, siyakukhuthaza ukuba uphinde uphonononge ukuba undwendwele ntoni eVeracruz. Ukuba awunabuganga bokwenza oko ngenxa yokunqongophala kwesifo, nantsi inqaku malunga iimfuno zokuhamba ngamazwe ungayenza ngaphandle koloyiko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Mekhsikho » Ukutya okuqhelekileyo kweVeracruz
Izitofu zokuya eBrazil
Ukuya phi ngoMeyi: Iindawo ezi-10 ezilungileyo